Home Wararka Madaxtooyada oo ku degdegtay war aysan shaacin Dowlada Itoobiya iyo Fashil laga...
Madaxtooyada oo ku degdegtay war aysan shaacin Dowlada Itoobiya iyo Fashil laga filan karo!!
Sida uu bartiisa Twitter-ka ku xaqiijiyay agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Cabdinuur Maxamed waxaa xabsiga la dhigay Col. Gebregziabher Alemseged Abraha,kaasi oo lagu garan ogyahay Janaraal gabre.
Taleefishinka ESAT ee dalka Itoobiya ayaa shalay baahiyey in Gebre laga qabtay oo lagu xiray duleedka magaalada caasimadda ee dalka Ethiopia,taleefishinka ayaa baahiyey, Gebre ayaa loo haystaa eedeymo ay ka mid yihiin inuu ku lug lahaa rabshado ka dhacay gobolka Soomaalida Itoobiya iyo inuu hub ka iibiyey kooxo ku sugan gudaha dalka Soomaaliya.
weli si rasmi ah uma xaqiijin warkan Dowladda Ethiopia. Sidoo kale,Su’aal ayaa la iskaweydiinayaa soo dhaweeynta Madaxtooyadda ee Xarigga Gabre.
Previous articleC/kariin Cali Kaar oo diidan in uu xilka ku wareejiyo Gudoomiyaha cusub Ee Howlwadaag!!
Next articleQatarta ka iman doonta xeer qaldan ee hawada dalka ku saabsan oo loo gudbiyay BJFS (Daawo)
maxaa ka jira in Sheekh Kenyaawi dil loogu hanjabay
Waa imisa tirada xildhibaanada ah ee ku sugan caleema saarka Axmed...